I-Villa 3 By The Sea - I-Airbnb
I-Villa 3 By The Sea
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sam & Shannon
U-Sam & Shannon Ungumbungazi ovelele
Jabulela ukuhlala kule Paradise Spa Villa endaweni engasebhishi ngokuphelele ngesitayela esishisayo - i-Aanuka Beach Resort.Ilungele iCouples Retreat yothando, i-suite yakho inegumbi lokugezela lesitayela se-atrium elimangalisayo eline-spa emise okweqanda, umuzwa ovulekile ovulekile kanye nekhishi elincane.Umbhede wenkosi onethezekile ungahlukaniswa ube yimibhede emi-2 yabantu abangabodwana uma uceliwe lapho ubhukha futhi kunombhede owodwa ogoqiwe ongu-1 egumbini lokuphumula ukuze uhlalise abantu abaningi abangu-3 sebebonke.
I-Resort Style Holiday Villa
* Igumbi lokulala eli-1 - Inkosi (lingahlukaniswa libe ngama-singles angu-2 x)
* Umbhede owodwa ogoqwayo ongu-1 egumbini lokuphumula
* Kuhlanganisa - ilineni elisha elihlanzekile, ukugeza umzimba, i-shampoo futhi kufaka phakathi amathawula olwandle.
* Indawo yokupaka eyimfihlo yamahhala yemoto engu-1 (izimoto ezengeziwe zipaka emgwaqeni noma epaki yezimoto zezivakashi)
* I-Wifi (Inkokhelo)
* Umshini wokuwasha kanye nesomiso
* Indawo yokudlela
* Igumbi lokusebenza/Igumbi Lomhlangano
* I-Wedding Chappel
* 3 x Amachibi
* 3 x Ama-spa angaphandle
* Inkundla yethenisi
* I-Beach Volley Ball
* I-BBQ yesivakashi
Ungakwazi ukudonsa isihlalo ngaphansi kwesihlahla sesundu noma ucwilise ilanga ngenye yamachibi okubhukuda angu-4.Uma uzizwa unomdlandla ngokwengeziwe kukhona Ijimu, Izinkantolo Zethenisi ezi-3, Igalofu i-Mini Putt Putt ne-Beach Volleyball ongakujabulela.
Gcoba idili kwenye ye-BBQs noma wenze isitsha esisha ukuze ujabulele ogwini noma eduze kwechibi.
Ungakhululeka ngokudla okuwine imiklomelo newayini e-Casay ogwini lolwandle, okunikeza ukubukwa okumangalisayo kolwandle noma uziphathe ngendlela yokwelashwa kwe-Mi-Time Day Spa.
Hamba uphumule e-Diggers Beach, uhambo olude eduze ne-Solitary Islands Coastal Walk noma uhambo olufushane lwamakhilomitha angu-2 ukuya e-Coffs Harbour ukuze uvakashele izindawo zokuthenga, ama-arcade noma amakhefi amaningi nezindawo zokudlela ezinhle.
I-Villa 3 itholakala ngaphakathi kwe-Aanuka Beach Resort, esendaweni yase-Coffs Harbour eyaziwa ngokuthi yi-Diggers Beach.Uma ungakaze uzwe nge-Diggers Beach empeleni isempumalanga ngqo ngasebhishi ukusuka eBig Banana.I-"Diggers" njengoba yaziwa abantu bendawo ingenye yezindawo ezikhetheke kakhulu ze-Coffs Harbour eziqhayisa ngezinye zezifunda ngamakhaya amahle kakhulu nabiza kakhulu futhi iyindawo enokuthula eyakhiwe imindeni eminingi kanye nabathathe umhlalaphansi.
Ibhishi lingenye yezintandokazi zasendaweni ngenxa yetheku lalo lemvelo elinikeza ukuvikeleka okuhle ezindleleni eziningi zomoya ngenkathi lisavumela ukukhukhumala ukungena okulenza libe yindawo edume kakhulu yendawo yokuntweza ngakho ungakhohlwa ukupakisha amabhodi.
Indawo isenyakatho nje yendawo enkulu ye-Coffs Harbour okusho ukuthi ungathenga ePark Beach Plaza noma e-Coffs Central noma uDining wethu e-Coffs Harbour Jetty Dining Precinct ngohambo olufushane nje.Uma uzizwa unomdlandla ungakwazi ngisho nokuthatha i-Solitary Islands Coastal Walk phezu kwe-headland kanye nogu lolwandle uye echwebeni ukuze uthole ukudla kwasekuseni.
Uma uhlala lapha uzobe useduze kakhulu neBig Banana Fun Park edumile kanye neSolitary Islands Aquarium.Uphinde ube uhambo olufushane oluya ku-Dolphin Marine Magic kanye neminye imisebenzi eminingi esekwe emanzini njengokubuka imikhomo, ukutshuza, ukushushuluza nge-snorkeling kanye namashadi okudoba yonke esebenza ngaphandle kwe-Coffs Harbour Marina.
Ibungazwe ngu-Sam & Shannon
Siyatholakala ukuze siphendule noma imiphi imibuzo ngohlelo lwethu lokusebenza Lwezivakashi noma ngocingo ngesikhathi sokuhlala kwakho.Uma kukhona okudinga ukunakwa ngesikhathi uhlala, sicela ukhululeke ukuxhumana.
USam & Shannon Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-16101